International Hotel Projects - Armati Hotel Project Na China
Armati Hotel Project Na China
Otu n'ime Armati 5 amalite hotel oru ngo na China, Asia,-nnọọ ka gaa na nke a hotel ịhụ anyị foset.
Armati 447 usoro foset catalouge biko na-esonụ:
Nịm na a praịm ọnọdụ nke Changsha, Changsha Vaya International Hotel na-ewepụta ihe nile n'obodo nwere na-enye nnọọ ná mpụga gị n'ọnụ ụzọ. The onwunwe na atụmatụ a dum nso nke ụlọ ọrụ ime ka gị na ọnụnọ bụrụ ahụmahụ dị ụtọ. -Uru nke ụlọ nkwari akụ ahụ 24-hour ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ezinụlọ ime ụlọ, ụgbọ ala ogige, akụrụngwa maka ndị ọlụsị ọbịa. Ime ụlọ ndị ọbịa na-ruo eruo na niile eji enyere ndụ aka gị mkpa maka a ezigbo ụra abalị. Na ụfọdụ nke ụlọ, ọbịa nwere ike ịhụ telivishọn, internet ohere - LAN (ekele), na-abụghị ise siga ụlọ, internet ohere - wireless, ịwụ. Aka ọbịa 'na ọnụnọ, na akụ awade ntụrụndụ ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka goofu N'ezie (on saịtị), sawụna, ịhịa aka n'ahụ, spa, ime ụlọ ọdọ mmiri. Enyi na enyi mkpara, oké ụlọ ọrụ na nso n'ebe ihe nile Changsha nwere na-enye na-atọ oké ihe ị kwesịrị ị na-anọ na Changsha Vaya International Hotel